Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii San Diego iyo soo dhowayntii gudoomiye ku xigeenka JXWO Dr. Maxamed Ismaciil Cumar oo toos u furmay
Shirkii San Diego iyo soo dhowayntii gudoomiye ku xigeenka JXWO Dr. Maxamed Ismaciil Cumar oo toos u furmay
Posted by ONA Admin	/ January 21, 2013
Gud. Ku-Xigeenka JWXO mudane Maxamad Ismaaciil oo socdaal hawleed ku marayay Waqooyiga Ameerika halkaasoo uu kula kulmayo jaaliyadaha Somaalida Ogadenya ee ku dhaqan Mareykanka iyoCanada ayaa gaadhay gobolka San Diego. Waxaa hadda si toos ah u furmay shirkii Jaaliyadda Ogadenia ee San Diego oo uu marti ku yahay gudoomiye ku xigeenka Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenia mudane Dr. Maxamed Ismaaciil Cumar.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb-galay ururada bulshada ee jaaliyadda Ogadenia. Waxaa sidoo kale lagu martiqaaday oo ka soo qaybgalay xubno ka mid ah Soomaali weynta ku dhaqan magaalada San Diego iyo nawaaxigeeda.
Gudoomiye ku xigeenka ayay jaaliyadda San Diego ku soo dhaweeysey sacab iyo sawaxan iyo waliba caleemo qoyan, waxaana madasha laga dareemeyey dareenka dadka oy ka muuqato xamaasad ay u hayaan marti sharafta u timid. Waxaa kaloo shirka marti ku ahaa madaxda Jabhadda ee North America iyo marti sharaf kale.
Socdaalka Gudoomiye ku-Xigeenka JWXO ayay ujeedadiisu tahay in lagu kala warqaato islamar ahaantaan looga waramo jaaliyadaha xaaladda uu ku sugan yahay halganka gude iyo dibadba, lagana dhagaysto jaaliyadaha warbixinadooda iyo talooyinka ay u soo jeedinayaan madaxda ururka.